Fitaovana 7 hamoronana sarintany misy hevitra amin'ny Internet sy amin'ny findainao | Famoronana an-tserasera
Sarintan-kevitra dia fitaovana ilaina handinihana ny angona, mitadidy hevitra, mianatra ary mamorona hevitra. Na dia ny fanaovana azy ireo amin'ny pensilihazo sy taratasy aza dia ho safidy foana, teknolojia manolotra antsika azo atao tsy manam-petra Maninona raha manararaotra azy ireo? Amin'ity lahatsoratra ity Nangoniko ireo fitaovana maimaimpoana 7 hamoronana sarintany misy hevitra amin'ny Internet sy amin'ny findainao. Samy manana ny tombony ananany ny tsirairay ary tsy maintsy manombatombana ianao hoe iza no tena mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Vakio hatrany ity lahatsoratra ity ary tadiavo ny sehatra tonga lafatra ho anao Azonao atao ny mandray ny fahaizanao mandinika amin'ny sehatra manaraka!
5 Sarintany feno fahendrena
Lucidchart Is a programa tsara mba hanaovana ny sain-tsarinao an-tserasera, ity app-tranonkala ity dia ahafahanao manambatra sary sy kisarisary hamoronana famintinana tena tsara izay tsy isalasalana fa hanampy anao hitadidy tsara ireo hevitra.Ny famoronana azy ireo dia tena tsotra, tsy maintsy hisintona sy handatsaka ireo boaty fotsiny ianao izay handehanan'ny lahatsoratra hamenoana azy ireo rehefa mandeha ianao. Tena haingana. Afaka manao izany koa ianao ampidiro ny antsipiriany rehetra tadiavinao, omeo loko izy na ampidiro sary.
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny fampiharana dia ny ahafahanao manafatra rakitra amin'ny endrika .txt ary mamorona kisary saina miaraka amin'ireo angona angonina ao. Vantany vao vonona ianao dia azonao atao ny manondrana azy amin'ny endrika tianao (PDF, JPEG ary PNG).
hafakely Izany dia fampiharana tranonkala be mpampiasa. Tsy hamela anao hamorona sarintany saina fotsiny, fa ho afaka hamorona tabilao mikorisa, solaitrabe misy soratra miraikitra ihany koa hahatsiarovanao ireo angon-drakitra manan-danja ary na dia ny fanesoana ny endrika fampiharana sy tranonkala aza. Tsy mampino ve izany?
Ny zavatra tsara indrindra ho an'ity rindranasa ity ho ahy dia ny tena intuitive ary mora ampiasaina. Noho izany, rehefa hanao drafitra ianao dia tsy handany fotoana mametraka boaty sy zana-tsipika tsara, hanao azy io ho azy ny app.
SimpleMind + es fampiharana maimaim-poana natao manokana hananganana sarintany saina izay manamora ny fianarana. Azo alaina ho an'ny Windows sy Mac ary ho an'ny takelaka iOS na Android na fitaovana finday io. Ny iray amin'ireo tombony dia mamela anao hamorona sarintany marobe amin'ny pejy tokana, zavatra tena ilaina raha ny tadiavinao dia ny afaka mahita ny hevitrao rehetra milamina indray mipi-maso.
Ary koa, miaraka amin'ny SimpleMind + azonao atao ny manampy sary amin'ny skema-nao. Amin'ny telefaona sy takelaka dia manome anao fahaizana manampy horonan-tsary sy feo na feo.
MindMeister Izany dia fampiharana feno tanteraka hamoronana sary, mamela ihany koa mamorona endrika tena kanto, manolotra paleta miloko maro karazana sy endrika boaty lahatsoratra samihafa. Ho fanampin'izay, azonao atao ny manampy naoty fanampiny sy fanehoan-kevitra amin'ireo boaty, tsy hita ireo amin'ny famolavolana lehibe, dia hiseho izy ireo rehefa tsindrio azy ireo.
Manolotra ihany koa a sary masina isan-karazany afaka manampy anao hanamafy hevitra izanyl! Ny hany maharatsy azy dia ny manaova ny sarintany telo fotsiny amin'ny kinova maimaimpoana ara-tsaina, na dia marina aza fa ny famandrihana "manokana" izay misy sarintany ara-tsaina tsy voafetra dia tena mora (4.99 euro isam-bolana),
Sarintany feno fahendrena
Sarintany feno fahendrena es iray amin'ireo tiako indrindra, dia tena mora ampiasaina ary maimaim-poana tanteraka izany, tsy misy famerana. Ankoatra ny tena ilaina amin'ny fanaovana drafitra isam-batan'olona, ​​io dia manome anao safidy hizara azy ireo amin'ny olon-kafa hiara-miasa. Azonao atao ny manitsy!
Ny lafiny tsara iray hafa dia izany ity fampiharana ity dia mamela ny sarintany hampidirina anaty tranonkala ary bilaogy amin'ny alàlan'ny rohy iray. Mazava ho azy fa raha zavatra manokana izy io ary tsy tianao ny hamoaka azy na aiza na aiza, azonao atao ihany koa ny misintona azy amin'ny endrika SVG, PNG ary JPG.
Canva dia fampiharana izay azo ampiasaina saika amin'ny zava-drehetra. Mametaka modely azonao ampiasaina mifanaraka amin'ny zavatra ilainao izy io, ary raha mamorona a izay ilainao sarintanin-kevitra na infografika misy endrika mahaliana, eo amin'ny toerana mety ianao.
Azonao atao miasa amin'ny modely na gorodonaRaha aleonao mamorona antontan-taratasy banga miaraka amina habe mahazatra ary hikarakara ny volavola ianao. Ny tombony lehibe azon'ny Canva dia izany ao anatin'ny fampiharana dia hahita trano famakiam-boky malalaka sy sary ianao, mba hahafahanao manampy ny loharano rehetra tsy miala amin'ny sehatra.
Canva koa dia manolotra ny fahafaha-miasa miaraka amina rohy ary mifanaraka amin'ny solosaina, takelaka ary iOS sy ny fitaovana finday Android.
Izy io dia fampiharana mahavariana for mamorona sarin-tsaina izay manamora ny fianarana ary ny famoronana hevitra, manana naoty tena tsara ao amin'ny Play Store (4,7 / 5) ary hevitra tsara indrindra. Izy io dia mifanaraka amin'ny Windows, Mac ary Linux ary miaraka amin'ny fitaovana finday iOS sy Android.
mindomo es Tena mora ampiasaina ary io no safidy voalaza raha mila izany ianao mamorona skema mora foana. Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny sarintanin'ny saina eo amin'ny efijery dia hamorona karazana ianao fampisehoana mahaliana ary vonona ny hozaraina amin'ny hafa. Ary koa, toy ny voavonjy ao anaty rahona ny zava-drehetra, ho eo an-tananao hatrany ny sarintaninao fa rehefa mila azy ireo ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Fitaovana 7 hamoronana sarintany misy hevitra amin'ny Internet sy amin'ny findainao
Inona no atao hoe art art